रुकुमपश्चिम घटनाबारे गृहमन्त्री थापाले बल्ल मुख खोले, सरकारले लिने भयाे यस्ताे एक्शन — Sanchar Kendra
रुकुमपश्चिम घटनाबारे गृहमन्त्री थापाले बल्ल मुख खोले, सरकारले लिने भयाे यस्ताे एक्शन
काठमाडौँ । रुकुम पश्चिममा तीन जनाको मृत्यु र तीन जना बेपत्ता हुने गरी भएको घटनाको छानबिन गर्नका लागि गृह मन्त्रालयले सहसचिवको नेतृत्वमा समिति गठन भएको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले दलित युवाले मल्ल थरकी युवतीसँग विवाह गर्न खोज्दा भएको घटनाबारे छानबिन गर्नका लागि समिति गठन भएको संसदलाई जानकारी गराएका हुन् ।
राष्ट्रिय सभाको मंगलबारको बैकठमा गृहमन्त्री थापाले उक्त घटनाबारे भने, ‘गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकृत प्रतिनिधि, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अधिकृत प्रतिनिधि र गृह मन्त्रालयका उपसचिव रहने गरी ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको छ ।’
गृहमन्त्रीले जाजरकोटका १९ जनाको समूह केटी भगाउन रुकुम पश्चिम गएको र त्यसै क्रममा केटी पक्षकाले आक्रमण गरेको जानकारी गराए । जसमा केटी भगाउने केटा नवराज विकसहित ३ जनाको शव भेटिएको र ३ जना बेपत्ता रहेको बताए । त्यस्तै बाँकीलाई सामान्य सोधपुछपछि प्रहरीले छोडेको पनि उनले जानकारी गराए ।
गृहमन्त्रीले कानुनी राज्य स्थापना गर्नेमा सरकार दृढ रहेको बताए । घटनामा संलग्न १२ जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको बताए । जसमा युवती, युवतीका आमाबुबा, वडाअध्यक्षसमेत रहेका छन् । जोसुकै भएपनि कानुनी कारबाही गरिने गृहमन्त्रीले बताए ।
सांसदहरूले जातीय भेदभावका घटना बढेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता राधेश्याम अधिकारीले घटनाको उक्त घटनाबारे सत्यतथ्य र त्यसविरुद्ध चालिएका कदमबारे जानकारी गराउन माग गरेका थिए । उनले कानुनले छुवाछुतलाई दण्डनीय भनेको तथा अपराध संहिताले छुवाछुतलाई कठोर रूपले दण्डनीय बनाउने व्यवस्था गरेको भन्दै उनले अहिले पनि दलितमाथि गैरदलितबाट आक्रमण हुनु लज्जास्पद विषय भएको बताएका थिए ।
उनले भने, ‘कानुनले छुवाछुतलाई कठोर रुपले दण्डनीय बनाउने व्यवस्था गरेको छ । छुवाछुतको आधारमा मानव मानवबीच विभेद कायम रहनु हाम्रो सामाजिक व्यवस्थाको लज्जाको विषय ठहरिनु पर्दछ । जाजरकोट नगरपालिकाका नवराज विक र रुकुम चौरजहारी नगरपालिका मलफर्कीकी युवतीबीचको प्रेम सम्बन्धलाई बिहेबारीमा परिणत गर्न गएका केही दलितमाथि भएको सांघातिक र सो हमलाबाट बच्न भेरी नदीमा हामफाली ज्यान गुमाउन बाध्य पारिएको नृशंस घटना प्रति म आफ्नो र आफ्नो पार्टीको तर्फबाट घोर भर्त्सना गर्न चाहन्छु ।’
के थियाे घटना ?
जाजरकोट र रुकुम पश्चिम — जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–४, रानागाउँका २० वर्षीय नवराज विक र पश्चिम रुकुमको चौरजहारी नगरपालिका–८, सोतीकी १७ वर्षीया मल्ल थरकी एक युवतीबीच तीन वर्षदेखि प्रेम सम्बन्ध थियो । कथित दलित समुदायका नवराज र ठकुरी समुदायकी ती युवतीको ‘जात’ नमिले पनि उनीहरु विवाह बन्धनमा बाँधिन चाहन्थे । त्यसैले नवराज शनिबार राति आफ्ना साथीहरुलाई लिएर दुलही ल्याउन चौरजहारी गए ।
तर, नवराजले न त घरमा दुलही ल्याए, न त आफू नै घर फर्किए । केटीतिरका मान्छेहरुको आक्रमणमा परेर उनको ज्यान गुम्यो । उनलाई साथ दिनको लागि सँगै गएका चौरजहारीका टीकाराम सुनार र रानागाउँका गणेश बुढा मगरको पनि मृत्यु भयो । अन्य तीनजना सन्दिप विक, लोकेन्द्र सुनार र गोविन्द शाही अहिले पनि बेपत्ता छन् ।
‘हाम्रो जातभात मिल्दैन, पहिले पनि तिमी लिन जाँदा उनीहरुले अपहेलना गरेका थिए । नल्याऊ बाबु भनेर सम्झाएकै थियौं,’ सोमबार नवराजकी आमा उर्मिलाले भनिन्, ‘भनेको मानेन, अहिले यो अवस्था देख्नुपर्‍यो ।’ माथिल्लो जातकी छोरीलाई बुहारीको रुपमा घरमा भित्र्याउँदा अपहेलित हुन डरले त्यसो नगर्न सम्झाउने गरेको उनले बताइन् ।
आफ्नी प्रेमिकालाई विवाह बन्धनमा बाँध्ने नवराजको यो दोस्रो प्रयास थियो । केही महिनाअघि पनि विवाह गर्न खोज्दा चौरजहारी इलाका प्रहरी कार्यालयको रोहबरमा उमेर पुगेपछि विवाह गर्ने गरी छुटाइएको थियो । आमा उर्मिलाका अनुसार ती युवती पुसमा दुईपटक नवराजको घरमा आएकी थिइन् । नवराज पनि युवतीको घरमा जानेआउने गर्थे । यद्यपि, युवतीका आमाबुवा दुईबीचको प्रेम सम्बन्ध टुटाउन चाहन्थे । पटकपटक नवराजलाई चेतावनी पनि दिएका थिए ।
नवराज आफ्ना साथीहरुलाई साथमा लिएर शनिबार राति युवतीको गाउँ सोती पुगेका थिए । एक्लै जाँदा खतरा हुने भएकोले १८ जना साथीलाई आफूसँगै लगेको उनीसँगै गएका सुदीप खड्काले बताए । नवराजको टोली सोती पुग्ने बित्तिकै युवतीका आमाबुवाले गाउँलेलाई बोलाएर अन्धाधुन्ध आक्रमण गर्न लगाएको उनीसँगै गएका खड्काको भनाइ छ । घटनामा परेर उनी पनि घाइते छन् ।
‘हामी केटीको घर पुग्न नपाउँदै उनकी आमाले डुम किन आयो, अस्तिको चोटले यसलाई पुगेनछ, आज यो डुमको टोलीलाई मार्नै पर्छ भन्दै कराउन थालिन्,’ उनले भने, ‘त्यसपछि त अरु मान्छे आएर हामीलाई लखेट्न थालिहाले ।’ केटीको आमाले गालीगलौज गर्ने बित्तिकै आफूहरु फर्किन थालेको, तर ५०/६० जनाको समूहले ढुंगामुढा गरेको उनले बताए ।
गाउँलेको समूहले करिब आधा घण्टासम्म ढुंगामुढा गर्दै लखेटेका थिए । उनीहरुले नवराजलाई ढुंगाले हानेर मारेपछि भेरी नदीमा फ्याँकेका उनीसँगै गएका अर्का युवा सरोज भँडेलले बताए । आफूहरुले नदीमा हामफाले पनि ढुंगामुढा गर्न नछाडेको उनको भनाइ छ । ‘हामीमाथि आक्रमण भइरहँदा प्रहरी पुगे पनि प्रहरीले कुनै एक्सन लिएन,’ उनले भने, ‘उल्टै उनीहरुलाई सहयोग गरेर आफ्नो बाटो लाग्यो ।’
नवराजले केटी लिन जाँदा घरपरिवारलाई जानकारी भने गराएका थिएनन् । उनी ‘काफल खान जान्छु’ भन्दै घरबाट निस्केका आमा उर्मिलाले बताइन् । उनका अनुसार यसअघि पनि युवतीका परिवारले ‘डुम’ भन्दै दुईपटक कुटपिट गरेका थिए । ‘तेस्रोपटक त मेरा छोराको ज्यानै लिए,’ उनले भनिन्, ‘दुलही लिन गएको छोरा लास बनेर आयो ।’
मृतकका परिवारले सोही वडाका वडाध्यक्ष डम्बरबहादुर मल्ल, केटीका बुवा बीरबहादुर मल्ललगायतले लखेटीलखेटी मारेको आरोप लगाएका छन् । मृतक युवाको शव जाजरकोट जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा रहेको छ । घटनालाई ढाकछोप गर्न खोजिएको भन्दै आफन्तले शवको पोष्टमार्टम गर्न दिएका छैनन् । उनीहरुले घटनामा संलग्नमाथि किटानी जाहेरी पनि दिएका छैनन् ।
जाजरकोटका प्रहरी प्रमुख डीएसपी किशोरकुमार श्रेष्ठले रुकुम पश्चिमको प्रहरीसँग समन्वय गरी घटनाको अनुसन्धान भइरहेको बताए । उनका अनुसार रुकुम प्रहरीले वडाध्यक्ष मल्लका साथै केटी, केटीका बुवा वीरबहादुर मल्ल, आमा प्रकाशी मल्ल, डिल्ली मल्ल, सन्तोष मल्ल, तुलबहादुर मल्ल, मानबहादुर मल्ल, रमेश मल्ललगायत १२ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ । घटनामा संलग्न अन्यको खोजी भइरहेको डीएसपी श्रेष्ठले बताए ।
सोतीका स्थानीय प्रकाश मल्लले लकडाउनको क्रममा ठूलो संख्यामा युवाहरु गाउँमा आएकोले पनि यो घटना भएको बताए । उनका अनुसार यसअघि पनि लकडाउनको समयमा नवराजको समूह दुईपटक गाउँमा आएको थियो । ‘गाउँलेले लखेट्दै लगेपछि उनीहरुमध्ये केहीले भेरीमा हामफालेका हुन्,’ उनले भने, ‘केही पुल तरेर गएका थिए ।’
अधिकारकर्मी पार्वती बिकले यो घटना जातीय विभेदको निर्मम नमुना भएको बताइन् । अनेक बहाना बनाएर घटनालाई जतातिर मोडे पनि जातभात नमिल्दा भएको कुटपिटले नवराज र उनका साथी मारिएका उनले बताइन् । ‘जातभातकै कारण भौतिक आक्रमण गरेर ज्यान लिने हर्कत अक्षम्य अपराध हो,’ उनले भनिन्, ‘यसमा संलग्न जोकोहीलाई कडा कारबाही गरिनुपर्छ ।’ उनले दवाव र प्रभावमा नपरी घटनाको निश्पक्ष छानबिन गरिनुपर्ने बताइन् ।
घटनामा परेर मृत्यु भएका ३ जनाको शब भेटिएको छ । नवराज र टीकाराम सुनारको शव आइतबार र गणेश बुढा मगरको शव सोमबार भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ । भेरी नगरपालिका–११ का लोकेन्द्र सुनार, गोविन्द शाही र सन्दीप विक बेपत्ता छन् । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेनाको टोलीले उनीहरुको खोजी गरिरहेको छ ।
तीनैजनाको शव भेरी नदी किनारको धल्ला भन्ने स्थानमा भेटिएको रुकुम पश्चिम जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक कविराज रोकायाले बताए । कार्यालयले उनको नेतृत्वमा घटना अनुसन्धान समिति बनाएको छ । घटनामा परेर भेरी नगरपालिकाका सुदीप खड्का, मदन शाही, सरोज भडेल, आशिष विकलगायत १२ जना घाइते भएका छन् । खड्का र शाहीको चौरजहारी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ भने अन्य सामान्य उपचारपछि घर फर्केका छन् ।
नवराज नेपाल प्रहरीको सिपाहीमा छनोट भएका थिए । तर, लकडाउनका कारण तालिममा भने सहभागी हुन पाएका थिएनन् । उनी बाबुआमाका एकमात्र सन्तान हुन् । ‘जागिर खाएपछि बिहे गर्छु, तपाईँहरुलाई सुखसँग पाल्छु भन्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘पापीहरुले संसारै अँध्यारो बनाइदिए ।’
२५ दिनसम्म बोलचाल बन्द भएका ओली-प्रचण्डबीच ‘वान टु वान’ वार्ता, के भयो सहमति ?
देशभर आईसीयू र भेन्टिलेटरमा कति कोरोना संक्रमितको हुँदैछ उपचार ?
नेकपा सचिवालय बैठक बालुवाटारमा जारी, ओली सहभागी छन् कि छैनन् ?
नेकपा हाइकमाण्ड बैठक बस्दै, ओली आउछन कि आउदैनन् ?